संघीय गठवन्धनको २६ बुँदे मागः मधेसमा २ प्रदेशदेखि बेरोजगार भत्तासम्म - Naya Samaya
संघीय गठवन्धनको २६ बुँदे मागः मधेसमा २ प्रदेशदेखि बेरोजगार भत्तासम्म
१५ वैशाख, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । काठमाडौंमा गठवन्धनका नेताहरुले २६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघीय गठवन्धनमा मधेसी मोर्चासहित २७ दल छन् । गठवन्धनको मागमा प्रदेशको सीमांकनदेखि कालोबजारी नियन्त्रण र रोजगार भत्तासम्म छन् ।
गठवन्धनले राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सिफारिस अनुसार तराई मधेसमा दुई प्रदेशको माग गरेको छ । बहुभाषिक नीति लागू पर्ने, प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट सङ्ख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।
गठवन्धनले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविनका न्यायिक छानजिन आयोगको गठन गर्न माग गरेको छ ।
भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उसले बताएको छ । ‘भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट के कति सहयोग, नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको ? सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने’ संघीय गठवन्धनको २६ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै उसले वेरोजगार युवाहरूलाई कि रोजगारी नभए जीवनयापन गर्न बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने गठवन्धनको माग छ ।
Previousहत्या अभियोगमा एमालेका पूर्वसभासद प्यासीलाई १० वर्ष जेल
Nextप्रारभ्मिक प्रतिस्पर्धामा पूर्णत वर्चश्व ट्रम्पको
सशस्त्रको एआइजी बढुवाविरुद्ध उजुरी
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी निर्णय
तिहार अघि नै मन्त्रिपरिषद ‘जम्बो’ बनाउने तयारीमा प्रचण्ड